नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एउटा मायालु, इमान्दार भाई जसको ईमेल पत्रले भाबुक बनायो !
एउटा मायालु, इमान्दार भाई जसको ईमेल पत्रले भाबुक बनायो !
सायद टिभि हेर्न पाएको भए तपाँइलाई चिन्थेहोला । माफ गर्नु होला दाई मैले टिभि हेर्न पाइन ।
म सानो छदा सल्यानको एउटा गाँउमा हुर्के, म त्यहाँ हुदा सम्म टि.भि. त के बिजुलि पनि पुगेको थिएन । मैले गाँउ छोड्ने समय तिर करिब एकघण्टाको दुरीमा सोलरबाट चल्ने टिभि ल्याएका थिए एक घन्टा टिभि हेरेको दश रुपैया तिर्नु पर्थ्यो । पुराना पुराना फिलिमका सिडि ल्याएर सादा फिलिम देखाउथे मैले ५ रुपैया तिरेर दुइपटक जति आधा फिलिम हेरेको थिए । कक्षा आठ सम्म सल्यानमै अध्ययन गरि म कक्षा ९ पढ्न दाङ झरे भरतपुरमा डेरा गरेर बस्थे । त्यतिवेला संकटकाल लाग्थ्यो रातिमा अरुको घरमा टिभि हेर्न जानेकुरा पनि मिलेन । साथिहरुले टेलि सिरियल र फिलिमका कहानिहरु स्कुलमा सुनाउथे, हेर्न त मन नभएको होइन तर अरुको घरमा गएर टिभि हेर्न मलाई मन पर्दैन थ्यो । कहिले काँही ठूलाठूला घटना घटे भने समाचार हेर्न अफ्ट्यारो मानिमानि घरवेटिकोमा
जान्थे । यसरि नै कक्षा १० पास गरियो । दश कक्षा पास गरे लगत्तै मैले घोराही शहरका कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा कम्प्युटर सिकाउथे धेरै त जान्दैन थिए तर पनि जानेका कुरा सिकाउथे त्यसबापत मैले महिनाको १००० तलव पाउथे । नयाँकुरा आफै सिक्ने प्रयास गर्थे । त्यसैले मलाई टिभि भन्दा कम्प्युटरमा रहर थियो र त्यसैमा समय दिन थाले त्यस पछि प्लसटु अध्ययन गर्ने क्रममा डेरा च्यान्ज गरियो त्यहाँ टिभि हेर्न सहज थियो संकटकाल पनि हटिसकेको थियो तर उनिहरु हिन्दि च्यानल हेर्न मनपराउथे त्यो म बुझ्दैन थिए । त्यसैले उनिहरुकोमा गएर टिभि हेर्न त्यति इनट्रेस्ट राखिन मैले । त्यसै समय ताका नेपाल टेलिकमले ए.डि.एस.एल सेवा सुरु गर्यो इन्टरनेट फास्ट चल्न थाल्यो । त्यो भन्दा पहिले डाएलअप मोडेम बाट ५६ केबिपिएसको इन्टरनेट १० वटा कम्प्युटरमा सेयर
गरिएको हुन्थ्यो चलाउनै मन लाग्दैन थियो । इन्टरनेट फास्ट भएपछि मैले गुगलको बारेमा थाहा पाँए र त्यसमा गएर खोज्न थाले म दिनभरि गुगलमै डुब्थे । गुगलमा सर्च गरेर नयाँ नयाँ सफट्वयरहरु सिक्थे । प्रयाक्टिस गर्ने समय मलाई पुग्दैन थियो । अनि आफ्नो पढाइ पनि । त्यसैले टिभि हेर्न पाइन ।
प्लसटु उत्तिर्ण गरिसके पछि म अध्ययनको लागि काठमाण्डौ पुगे कृतिपुरमा डेरा गरि बस्नथाले एउटा प्राथामिक बिद्यालयको शिक्षकको छोरोले काठमाण्डौमा टिभि किनेर डेरामा राख्ने कुरा अति असम्भव थियो र काठमाण्डौंमा डेरा गरि बस्ने विद्यार्थि केहि भाग्यमानिले मात्र पाउछन् घरबेटिको रुममा छिरेर टिभि हेर्न अवसर तर मलाई त्यो अवसर पनि मिलेन । तर पनि मेरो कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट भएको हुदा न्युरोडबाट सेकेन्डहेन्ड मनिटर किनेर कम्प्युटरका पार्ट पुर्जालाई भुइमा जोडेर सुतेर चलाउन मिल्ने कम्प्युटर तयार पारेको थिए । त्यसलाई टेबुलमा जोडेको भए बसेर पनि चलाउन त मिल्थ्यो तर मलाई टेबुल र कुर्सि मा लगानि गर्नु भन्दा त्यहि कम्प्युटरकै पार्टहरु थपेर एड्भान्स बनाउन मन भएको हुदा टेबुल र कुर्सिमा लगानि गरिन । यसरिनै टिभि पनि जोडेर बनाउन सक्ने भए त्यो पनि बनाउथे होला । टिभिमा सिनेमा र नाटकहरु हेर्ने रहर मलाई पनि थियो साथिहरुले कुनकुन गेमको कुरा गर्थे म यसको फ्यान यसले जित्छ । यो मुभि राम्रो रैछ भन्थे । साथिहरुले टेलि सिरियलमा भनिने कलाकारका थेगो प्रयोग गरेर बोल्थे । हिरो हिरोनीका कुरा गर्थे मलाई यो फिलिममा यो कलाकारकोे रोल मनपर्यो यो सिरियल मा यस्ते भयो भन्थे । आफू भने यस बिषयमा अनभिज्ञ नै रहन्थे । अझै पनि म केही कलाकारहरुलाई मात्र नामबाट चिन्छु त्यहि पनि प्रत्यक्ष देखे भने चिन्दिन होला ।
तर पनि मैले आफूसंग भएको सुतेर चलाउने कम्प्युटरलाई प्रयोग गरेर त्यसमा धेरै प्रगति गरिसकेको थिए काठमाण्डौंको अध्ययन पश्चात मैले दाङको तुलसिपुरमा आएर कान्तिपुर कम्प्युटर एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर नामको इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा ल्याए । देशमा लोडसेडिङ यति चरम चुलिमा पुग्यो कि मैले अलिकति पनि बिद्युत पाँए भने कम्प्युटरकै मा गर्थे । कतिवेला टिभि हेर्नु । तर पनि प्रयाश नगरेको भने होइन दिदिको घर नजिकै थियो त्यहाँ गएर टिभि हेर्न खोज्दा रिमोट भान्जा भान्जिको हातमा हुन्थ्यो । उनिहरुले हेर्ने च्यानल र मैले हेर्न चाहने च्यालन मिल्दैन थियो त्यसैले टिभि हेर्न पाइन ।
आज म अमेरिकामा साथिको अपार्टमेन्टमा रुम सेयर गरेर बसेको छु । यहाँ पनि मैले टिभि हेर्न पाएको छैन । म यहाँ आउनु भन्दा अगाडि साथिले टिभि किनेको रहेछ । उ पनि मजस्तै शिक्षकको छोरो टिभि हेर्न नपाएकै मान्छे हो । उसले यहाँ आए पछि ठूलै टिभि किनेछ, ठूलो मात्र होइन चस्मा लगाएर हेर्ने थ्रिडिनै किनेको थियो रे पछि महिना महिनामा तिर्नु पर्ने किस्ता बुझाउन हैरान भए पछि त्यो फिर्ता गरेछ अब उसले टिभि नकिन्ने भन्छ । म एउटाको इच्छाले मात्र पनि नपुग्ने संगै बसे पछि । एउटा एप्पलको ल्यापटप छ साथिको यसैमा युट्युबमा गएर टिभिका केहि कार्यक्रम कहिले काँहि समय मिलेमा हेरिन्छ ।
यति गति गफ लगाउनुको कारण केहो भने हिजो मेरो मोबाइलमा नयाँ नंवरबाट फोन आयो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले तिम्रो लेख सेतोपाटिमा पढे सारै मन पर्यो त्यसैले मेरो व्लगमा पनि राखेको छु । भन्दै हुनुहुन्थ्यो “मलाइ चिन्यौ, मेरो नाम राम प्रशाद खनाल कहिलै टिभि हेर्ने गरेको थियौ, ?” यति माया गरेर फोन गरिसके पछि चिन्दिन पनि भन्न सकिन । अअ नाम सुनिराखेको जस्तो लाग्यो भने हुन त म आधा निद्रामै कुरा गरिरहेको थिए । उहाले म नेपाल टेलिभिजनमा मा थिएँ पहिला । लोकदोहरी कार्यक्रम कार्यक्रम हेर्थ्यौ ? भन्नु भयो । रातभरि कामगरेर थोकेको ले दिउसोको निद्रा प्रेमिकाको माया भन्दा कम थिएन । त्यै पनि उठेर युट्युवमा सर्च गरेर उहाँका केहि दोहरी गितहरु भेट्टाए । अनि बिस्वसलाग्यो हो रहेछ । सायद टिभि हेर्न पाएको भए तपाँइलाई चिन्थेहोला । माफ गर्नु होला दाई मैले टिभि हेर्न पाइन ।